Aung's Investment: How to Trade LikeaProfessional
ကျွန်တော်စပြီး tradingလုပ်တုံးက စနစ်ဆိုတာမရှိဘုး။ နည်းနည်းပါးပါးလေ့လာပြီး ဒီလိုပဲဝင်လုပ်လိုက်တာပဲ။ အစပိုင်းမှာ မြတ်တာတွေရှိသလို၊ ရှုံးတာတွေလည်း ရှိတာပေါ့။ အစပိုင်းမှာ အမြတ်က ထင်သလောက် သိပ်မကျန်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာပြန်ပြီး Analyseလုပ်ကြည့်တော့ Methodပိုင်းမှာ ဒီလောက်အားနည်းတာ မတွေ့ရဘူး။ Methodပိုင်းက စာဖတ်နိုင်ရင်၊ Softwareနဲ့ Data ရှိရင်ရတယ်။ အရှုံးဆိုတာမရှိ(၁)မှာ ရေးခဲ့သလိုပဲ Traderတွေအားလုံး ဒီMethodတွေသိရဲ့သားနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘာလို့ဒီလောက် Money making ability တွေကွာနေရသလည်းဆိုတဲ့ Topicဟာ ကျွန်တော့်ကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က သဘောကျတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပဲ တချိန်လုံးတွေးနေမိသလို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အောက်မှာရေးထားတာတွေဟာ နှစ်နဲ့ချီပြီးမှ သိလာရတဲ့၊ လုပ်လာနိုင်တဲ့ Knowledgeတွေပါ။ ဒါတွေကို Applyလုပ်နိုင်ရင် Professional traderဖြစ်ဖို့နီးစပ်လာပါလိမ့်မယ်။
Methodတွေ ကျွမ်းကျင်တာနဲ့ Professional Traderမဖြစ်ပါဘူး။ စာအုပ်ဆယ်ဒါဇင်သွားဖတ်ပြီး Marketထဲဝင်လာခဲ့၊ ရှုံးစေရမယ်။ Money Management Skillကို Developမလုပ်သရွေ့ ကြိုက်သလောက်မြတ်၊ Marketထဲကို ပြန်ပါသွားစေရမယ်။ အထူးသဖြင့် အခုလိုခေတ်ထဲမှာ Government/Central Bank interventionတွေ အရမ်းများပါတယ်။ ဟိုးတနေ့ကပဲကြည့်၊ Tradeတစ်ခုဝင်ခါရှိသေး Kim Jongက ထဆော်လို့ အမြန်လိုက်ပိတ်ရတယ်။ Market Correctionဖြစ်တော့မယ်ထင်တဲ့အချိန်မှာ US Fed Chairman Ben Bernankeက ပိုက်ဆံတွေ ရိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ Marketဟာ မကျတော့ဘူး။ ဒါမျိုးတွေပေါ့။ အဓိကပြောချင်တာက ကြိုက်သလောက် Analyseလုပ်၊ ကိုယ့်ရဲ့Tradeဟာ ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ See the catch word here? "ခွက်ခွက်လန်" ဆိုတာမဖြစ်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ခင်ဗျားကော ဖြစ်ဘူးလားဆိုရင် ဂုဏ်ယူစွာပြောရမှာပဲ - ဖြစ်ဘူးတာပေါ့၊ လန်နေတာပဲ :) Professional Traderတွေမှာ small managed lossesတွေပဲရှိတယ်၊ ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်အောင် Good Money Management Skillတွေ လိုပါတယ်။
Amateur Traderတွေဟာ Marketထဲဝင်လာလာချင်း Big Profitတွေလုပ်ဖို့ ဝင်လာကြတာပါ။ Professionalတွေကတော့ နေ့တိုင်း Big Lossesတွေမဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ Professionalတွေဟာ Lossတွေကို ကောင်းကောင်းManageလုပ်ရင် Profitဟာ Autoဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပေမယ့် Amateurတွေကတော့ အရှုံးဆိုတဲ့စကား မကြားလို - မြန်မာလိုယူရင်တော့ နမိတ်မရှိဘူးပေါ့။ Dr. Alexander Elderပြောဘုးတဲ့စကားရှိတယ် - "A fool and his money can throw one hell ofaparty"တဲ့။ Marketထဲကို Profitဆိုတာပဲတွေးပြီး ဝင်လာတဲ့သူဟာ အဲဒီ့စကားအတိုင်းပါပဲ။ Marketထဲမှာ Foolမဖြစ်အောင် နည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။ Seriously, တစ်ခုပဲရှိတယ်။ Manage your losses and haveagood money management discipline.
One example of good money management - R-multiple system
Dr. Van Tharpရဲ့ R-multiple management systemဟာ တော်တော်ကောင်းတဲ့ money managementတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးပါတယ်။ R-multiple systemမှာ Rဆိုတာ Riskကိုပြောတာပါ။ Traderတစ်ယောက်ဟာ Tradeတစ်ခုမဝင်ခင် ဘယ်လောက်အရှုံးခံနိုင်မလည်းဆိုတာ တခါတည်းကြိုပြီး Defineလုပ်ရပါမယ်။ အများအားဖြင့် Tradeတစ်ခုအတွက် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံရဲ့ ၂%ကနေ ၅%လောက်ပဲ အရှုံးခံသင့်ပါတယ်။ ၂%-၅%ဆိုတာ Marketထဲကို အပါခံနိုင်တဲ့ Amountကိုပြောတာပါ။ Tradeတစ်ခုရဲ့ total costမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်Professionalတွေအတွက် ၂%ဆိုတာတောင် လွန်လှပြီ၊ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံနည်းနည်းနဲ့စတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်ကျတော့လည်း ၂%က Practicalမဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်၂%-၅%လို့ပြောတာပါ။
Rဘက်ကို ပြန်သွားရရင် Traderတစ်ယောက်ဟာ R amountရှုံးတာနဲ့ cut lossလုပ်ဖို့Ready ဖြစ်နေဖို့လိုသလို R amountရဲ့ multipleတစ်ခုမှာ Profit takingလုပ်ဖို့လည်း determineဖြစ်ရပါမယ်။ ဥပမာ 2R or 3R amountပေါ့။ Rဟာ $200ဆိုရင် 2Rဟာ $400ကို ဆိုလိုတာပါ။ R-multipleနဲ့ တွဲပြီးလုပ်ရမှာက ကိုယ့်ရဲ့ Trading systemပါ။ Trading systemဆိုတာ Entry, Exit rulesတွေကို Technical, Fundamentalတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး generateလုပ်တာကို ခေါ်တာပါပဲ။ ဥပမာ MACD crossoverဖြစ်ရင် ဝယ်မယ်/ရောင်းမယ်၊ trend line brekoutဖြစ်ရင်တော့ ဝယ်မယ်/ရောင်းမယ် အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ No system is perfect but there has to be some probability of success of your trading system. ဥပမာ ကိုယ့်systemဟာ ၆၀%တော့ မှန်တယ်၊ ၇၀%တော့မှန်တယ် ဆိုတာမျိုးပါ။ အောက်က Tableလေးကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
Risk or R
ဒီTableထဲက Figureတွေဟာ ဖတ်ရလွယ်အောင် လုပ်ထားတာပါ။ Totalပိုက်ဆံ ၁သောင်းရှိတဲ့ Traderဟာ Tradeတစ်ခုစီကို ၂ထောင်စီရင်းပါမယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ Rဟာ ၂၀၀ပါ။ Totalပိုက်ဆံရဲ့ ၂%ပေါ့။ ဒါဟာ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ၂-၅% rangeမှာ Conservative rangeပါ။ Reward multipleကတော့ 2Rပါ။ Riskယူတာရဲ့ နှစ်ဆရရင် ရောင်းမယ်ပေါ့။ Method(Technical, Fundamental)ပိုင်းက ဘယ်နေရာကပါလဲဆိုတော့ Probabilityပိုင်းက ပါပါတယ်။ ဒီExampleမှာ ကျွန်တော်ဟာ 50%ပဲမှန်တဲ့ Systemကို သုံးပြထားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၅၀%ထဲပါ။ Marketထဲမှာ 90%လောက်မှန်မှ ပိုက်ဆံရှာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်နေတယ်မဟုတ်လား။ ဒီExampleဟာ ၅၀%မှန်တဲ့ Systemပဲလိုတယ်။ ခေါင်းပန်းလှန်တဲ့ Probabilityထက်နည်းနည်းပဲ သာဖို့လိုမယ်။ ၅၀%ပဲမှန်တဲ့အတွက် ဆယ်ခါTradeတဲ့အခါမှာ ၅ခါရှုံးပြီး ၅ခါမြတ်ပါမယ်။ Keyက ရှံးတဲ့အခါမှာ R amountကိုရှံးပြီး မြတ်ရင် 2Rမြတ်ရပါမယ်။
အဆုံးသတ်မှာ ၁၀၀၀အမြတ်ကျန်ပါတယ်။ ၁၀% returnပေါ့။ ဒါဟာ ဘဏ်တိုးထက် အသာလေးသာပါတယ်။ Traderဟာ weekly, fortnightly frequencyနဲ့ Tradeတယ်ဆိုရင် အဲဒီ့periodတစ်ခုပြီးတိုင်း ၁၀%ကျန်ပါမယ်။ တစ်ပတ်ကို ၁၀%ကျန်ရင်, တစ်လဆိုရင် ၄၀%။ Summaryပြောရရင်
R ဟာကိုယ့်ရဲ့ total equity/cashပေါ်မူတည်ပါတယ်။
Tradeတစ်ခုဟာ R amountရှုံးနေပြီဆိုရင် cutရပါမယ်။
R-multiple amountတစ်ခုမြတ်နေပြီဆိုရင် profit takingလုပ်ရပါမယ်။
Method - Technical, Fundamentalတွေဟာ Probability systemအနေနဲ့ပဲမြင်ရပါမယ်။ သူတို့ရဲ့ Success rateဟာ အနည်းဆုံး ၅၀%ရှိသင့်ပါတယ်။
ဆက်တိုက်ရှုံးလာရင် ကိုယ့်Methodဘာလိုနေလည်းဆိုတာ continually refineလုပ်သွားရပါမယ်။
Van Tharpရဲ့ R-multiple systemဟာ very simpleဖြစ်ပေမယ့် ဒါဟာProfessionalတွေ Tradeတဲ့ နည်းစနစ်အတိုင်းပါပဲ။ Proတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်တစ်ရာကျော်ကတည်းကနေ အခု၂၁ရာစုအထိ ဒီနည်းနဲ့ပဲ Tradeပြီး Financial Freedomကို ရခဲ့ကြတာပါ။ အပေါ်က exampleမှာ Tradeစုစုပေါင်း ၁၀ခုရှိပါတယ်။ ကိုယ်Riskယူတဲ့ Rက ၂၀၀, 10 tradeမှာ မြတ်တာက ၁၀၀၀ဆိုတော့ total profitဟာ 5Rလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ 5Rကို 10 tradeနဲ့စားရင် 0.5Rဆိုပြီး averageရပါမယ်။ အဲဒါကို Van Tharpက Trader's life expectancyလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ Life expectancyဟာ အနှုတ်ပြနေရင် အချိန်တန်ရင် အရင်းပြုတ်မှာပဲ။ အပေါင်းပြပြီး တိုးတိုးလာသရွေ့ ကိုယ့်ရဲ့equityဟာလည်း တိုးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Amateurတွေ ဘာလို့Marketထဲကနေ Washed outဖြစ်ဖြစ်သွားသလည်း ကျွန်တော် Exampleနဲ့ပြပါမယ်။ အပေါ်က Tableကိုပဲ Riskကို 2Rယူပြီး မြတ်ရင် R amountနဲ့ မြန်မြန်ကျေနပ်တတ်တယ်လို့ တွေးလိုက်ပါ။ ဒီတော့ ရှုံးနေရင် ၄၀၀အထိစောင့်ပြီး မြတ်ရင်တော့ ၂၀၀နဲ့ ပျော်တယ်ပေါ့။ နောက်ဆုံးပိတ် ၁၀၀၀ရှုံးပါမယ်။ -0.5R expectancy ပြပါတယ်။ Key pointက Amateurတွေဟာ ရှုံးရင် ပြန်လာနိုးHopeလေးနဲ့ 2R+အထိစောင့်ပြီး မြတ်ရင်တော့ R amountလောက်အထိပဲ လောဘကို ထိန်းနိုင်လို့ပါပဲ။
Risk or 2R
ဒါတွေအားလုံးကို အတိုချုပ်လိုက်ရင် - "Cut your losses fast and Let your profit run". ဒီ R-multiple system ဥပမာကနေ Tradeချင်းအတူတူ၊ Probability systemချင်းအတူတူပေမယ့် Different money managementကြောင့် traderနှစ်ယောက်ဟာ လူချင်းကွဲသွားတယ်ဆိုတာ အရှင်းကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီPostကနေ အဲဒီ့ Conceptလေးရသွားရင် Professional Traderဖြစ်ဖို့ နီးစပ်လာပါပြီလို့။
It's too simple to convince people that this is the ONLY way to make money in the market!
PS : Van Tharpရဲ့ Trade Your Way to Financial Freedomဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 12/02/2010 12:21:00 PM
Labels: Management, money management, R-multiple, Trader's life expectancy, Van Tharp
Jimm Terry December 02, 2010 5:46 PM
Thanks you. I think that's simple and perfect way!
Aung Myo Htet December 03, 2010 9:26 AM
Yes Jimm, Amateurs keep their system unnecessarily complex while Pro's keep theirs simple.